Takashanda nevakawanda vatengi uye takavaka mazana emasaiti eWordPress pamusoro pemakore. Haisi iyo basa redu kugadzira WordPress saiti, asi isu tinomira tichizviitira vatengi vazhinji. Vatengi havauye kuzoshandisa WordPress saiti kazhinji. Ivo vanowanzouya kwatiri kuzobatsira kukwidziridza yavo saiti yekutsvaga, yemagariro, uye shanduko.
Kazhinji kazhinji kwete, isu tinowana mukana weiyo saiti kukwidzirisa matemplate kana kuvaka matsva ekumhara peji matemplate, uye isu tinowana chimwe chinhu chinotyisa. Isu tinowanzo tsvaga yakagadzirirwa-inotsigirwa, tsigiro yakatsigirwa-zvakanaka iyo yakatengwa senheyo dzesaiti uye zvobva zvashandurwa zvakanyanya nesangano remutengi rapfuura.
Sezvo madingindira achiwedzera kuwedzera kubatikana, dingindira rinowanzo kutengeswa uye rinowanzo gadziridzwa kuti utarise mabugs kana maburi ekuchengetedza. Vamwe vagadziri vemusoro vanotoenderera mberi nekuvandudza maficha mune yavo tema nekufamba kwenguva kana kutsigira iyo theme kuburikidza neiyo WordPress vhezheni vhezheni. Isu tinotenga ruzhinji rwemusoro wedu kubva Themeforest. Iwe unozoona iwo epamusoro madingindira paTemethusiti anotengeswa makumi ezviuru enguva uye aine akazara dhizaini ejensi anoenderera kuvatsigira.
Vana Themes vanowanzo gadzirirwa nemusoro wevabereki uye vanodanwa zita remusoro wenyaya neMwana pairi. Kana dingindira rangu riri Avada, Iyo Yemwana theme inowanzozivikanwa inonzi Avada Mwana uye iri mune iyo avada-mwana forodha. Haisiyo yakanakisa kutumidza musangano, saka tinotumidza zita rekuti theme mune iyo style.css faira, tumidza zita zvakare folda mushure memutengi, uyezve woisa skrini yeiyo yekupedzisira, yakagadzirirwa saiti. Isu tinogadzirisawo zvitaera zvemashizha kuitira kuti mutengi agone kuziva kuti ndiani akavaka mune ramangwana.
kana Child Theme haina kubatanidzwa, unogona kugadzira imwe. Muenzaniso weiyi ndeyeMusoro weVana watakagadzirira yedu agency. Takatumidza dingindira DK New Media 2018 mushure medu saiti uye gore zvayakaitwa uye yakaisa iyo Yemwana theme mune dhairekitori imwe-sere. Iyo CSS masitayiti yakagadziridzwa neruzivo rwedu:
/ * Zita Rezita: DK New Media 2018 Tsananguro: Mwana theme ye DK New Media zvichibva pane iyo Avada theme Munyori: DK New Media
Munyori URI: https://dknewmedia.com Template: Avada Shanduro: 1.0.0 Rugwaro Domain: Avada * /
Kana paine faira mu Child Theme uye iyo Yevabereki Musoro, iyo Yemwana theme faira ichave rinoshandiswa. Icho chinosarudzika mabasa.php, uko kodhi mune ese madingindira achazoshandiswa. Themes dzeVana mhinduro inopenya kudambudziko rakaoma kwazvo. Kugadzirisa yakakosha theme mafaera ndeye kwete-kwete uye haifanire kugamuchirwa nevatengi.
Iwe wahaya agency yekukuvakira saiti, uye ivo vaita inotsigirwa-inotsigirwa Parent theme uye yakanyanya yakasarudzika Yemwana theme. Mushure mekunge saiti yaburitswa uye iwe wapedza chibvumirano, WordPress inoburitsa yekukurumidza emergency iyo inogadzirisa gomba rekuchengetedza. Iwe unovandudza WordPress uye yako saiti ikozvino yaputswa kana isina chinhu.